Domek z Klimatem kunye nepropati eyodwa (Septemba-Aprili)
Smołdziński Las, Pomorskie, Poland
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguDariusz
Mhambi othandekayo! Senza zonke iinzame ukuze uzive ukhululekile ukuba kunye nathi. Indlu yonke isesandleni sakho, kwaye ukusuka phakathi kuSeptemba ukuya ekupheleni kuka-Epreli (ngaphandle kweempelaveki ezinde kunye neeholide) unokuqiniseka ukuba uya kuba nguwe wedwa kuyo yonke ipropati (1500 m2), eya kuthi. ikubonelela ngemfihlo epheleleyo kwaye ngokuqinisekileyo iya kukwandisa intuthuzelo yakho ngakumbi. Zive inkululeko kwindawo yesithintelo yePaki yeSizwe yaseSłowiński!
Kukho indawo yokupaka kwibala elibiyelweyo.
Kwaye yintoni ebalulekileyo - i-fiber-optic intanethi endlwini!
Indlu igqitywe ngamaplanga ngokuqwalasela iinkcukacha. Siyakuthanda ukuba kuyo kwaye sijonge iinkwenkwezi ngelixa silele kwigumbi lokulala - kukho umbono ogqibeleleyo weDipper enkulu. Ngokuhlwa unokubona ukukhanya kwendlu yokukhanya yeCzołpino. Ekuphumeni kwelanga, iinkungu zemilingo zihlala zigubungela amasimi kwaye ikhonsathi yeentaka kusasa iyamangalisa, ngakumbi entwasahlobo. Ngelixa uhleli ethafeni, unokubukela iingwamza zihamba kwidlelo elikufutshane. Amaxesha amaninzi, amaxhama nawo asondela elucingweni. Uxolo kunye nokuzola kwenza kube nokwenzeka ukuba uchithe ixesha elimangalisayo kule ndawo kwaye uphumle kude nesiphithiphithi sobomi bemihla ngemihla.
Kumda okufutshane wendlwana, kukho iindlela ezininzi ezintle zokukhwela intaba, ukukhwela ihashe kunye neendlela zokuhamba ngebhayisekile (irenti yebhayisekile ekufutshane), kubandakanya:
- ukuya kwindlu yesibane eCzołpino,
Kwimyuziyam evulekileyo eKluki,
- ukuya encotsheni yeRowokół,
- ukuya kumachibi: Dołgie, Gardno, Łebsko,
- ukuya kwiilali zaseRowy, eUstka, naseŁeba.
Ke ukuba ujonge ukuphumla kuLwandle lweBaltic kufutshane nendalo, kude nendawo ephithizelayo, uya kuyifumana apha. Ukongeza, ukudibanisa ngokwemvelo kwiindawo ezingqongileyo - kodwa ngexesha elifanayo unyaka wonke kwaye ukhululekile ngokupheleleyo - indlu yokhuni iya kukuvumela ukuba uzive umoya we-idyllic.
Umbuki zindwendwe ngu- Dariusz